Asa mivaingana | NewsMada
Tsy asiana adihevitra be fa mazava ny foto-kevitry ny fanjakana. Nohitsin’ny filoham- pirenena, Rajoelina Andry, fa laharam-pahamehana ny fitsinjovana ny vahoaka maro anisa. Noporofoiny izany tamin’ny fanamboarana ny lalam-pirenena Ambilobe-Vohémar satria hanomboka ny asa. Novakiny bantsilana fa nisy tamin’ny fitondrana teo aloha, nanao sarintsary nanomboka ny asa, nefa tsy notanterahina akory. Mazava ny antony, hataon’ny mpitondra nifanesy teo aloha fitaovana ny tetikasa iray na maromaro hakana ny fon’ny vahoaka. Tsy izany anefa ny ataon’ny fitondram-panjakana, ankehitriny, fa tonga dia asehony amin’ny alalan’ny asa, toy ny efa natao any Toamasina, ary izao hiditra any amin’ny faritra Diana sy ny faritra Sava izao indray.
Midika izany fa tsy fanaon’ny filoha Rajoelina Andry sy ny mpiara-miasa aminy ny manao “kobaka am-bava na ronono an-tavy”, ilay voambolana nivoaka fony Repoblika faharoa, fa asehony amin’ny asa azo tanterahina sy zavatra azo tsapain-tanana ny tena atao hoe “asa mivaingana”.
Nanome toky rahateo izy, nialoha ny naha voafidin’ny Malagasy maro anisa azy hitondra ny firenena, fa “tsy maintsy tanterahiny sy vitany ny toky nomeny”. Mazava ny resaka, azo antoka, fa santatra, fanombohana ny fanajariana ny any Toamasina, ny lalana any Ambilobe-Vohémar, fa tsy maintsy “hataony” ary ho “vitany” ny famahana ny olana ifotony, manerana ny faritra maro, mampikaikaika ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka.
Raha lalana no resahina, ho avy ny fotoana, hilazana ny hanombohana asa fanarenan-dalana ny any amin’ny toerana ananan’i Madagasikara otrikarena. Laharam-pahamehana ny famoaham-bokatra, any amin’ny ireo tena mamoka-bary, indrindra ny any Alaotra (RN 44), ny any Marovoay, ny any Bealanana, sns. Azo antoka fa ho vita izany!